नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : उनै थापा वरिष्ठ अधिवक्ता, नागरिक समाजका अगुवा तथा न्याय र कानुनको संरक्षकका रूपमा सधैँ चर्चामा छन् । तर, सात वर्षपछि अर्को भदौ २४ मा दुनियाँले शम्भु थापालाई फेरि चिन्ने मौका पाएको छ ।
उनै थापा वरिष्ठ अधिवक्ता, नागरिक समाजका अगुवा तथा न्याय र कानुनको संरक्षकका रूपमा सधैँ चर्चामा छन् । तर, सात वर्षपछि अर्को भदौ २४ मा दुनियाँले शम्भु थापालाई फेरि चिन्ने मौका पाएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र भदौ २४ बीच भयानक संयोग रहेछ । सात वर्षअघि आजैका दिन कोटेश्वरबाट आठ वर्षीय अबोध बालक विवेक लुइँटेलको अपहरण भएको थियो, टाउको एकातिर र ढाड अर्कोतिर पारेर धोबीखोलामा फालिएका बालक विवेकको हत्या खबरले सिंगो देश रोएको थियो । विवेकका बाबुआमाप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै देशका लाखौँ बाबुआमाले अपहरणकारीलाई फासी देऊ भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । तर, सिंगो देशले बगाइरहेको आँसुको भेलबीचबाट एउटा असाधारण मुटु भएको मान्छे निस्कियो, जसले अपहरणकारी समूहकी नाइके पतेनी लामालाई कानुनको पन्जाबाट छुटाउन मुद्दा लड्ने जिम्मेवारी लियो । पतेनी लामा जसले आठ वर्षीय बालकलाई दुई टुक्रा पार्न पेसेबर हत्यारालाई हतियार दिएकी थिइन्, तिनैलाई निर्दोष साबित गर्न कसम खाने दुर्लभ कलेजो भएका मान्छे शम्भु थापा नै हुन् । कोटेश्वरनिवासी थापाले आफ्नै छिमेकी बालक वियोगमा बाबुआमाको रोदन नसुनेपछि छिमेकीहरू नारा–जुलुस गर्दै उनको घर घेराऊ गर्न बाध्य भएका थिए । उनै थापा वरिष्ठ अधिवक्ता, नागरिक समाजका अगुवा तथा न्याय र कानुनको संरक्षकका रूपमा सधैँ चर्चामा छन् । तर, सात वर्षपछि अर्को भदौ २४ मा दुनियाँले शम्भु थापालाई फेरि चिन्ने मौका पाएको छ । आजै सर्वोच्च अदालतमा उनी असाधारण रुप लिएर भन्दै छन्, ‘म यो देशको वरिष्ठ अधिवक्ता हुँ, मेरो कार्यालयमा छापा मार्न पाइँदैन ।’ शम्भु थापा कानुन व्यवसायी हुन्, सज्जन अथवा दुर्जन जोसुकैको विषयमा मुद्दा लड्न पाउनु उनको पेसागत अधिकार हो । थापाले पूर्वमन्त्री खुमबहादुर खड्का भ्रष्टाचारी होइनन् भनेर पनि सर्वोच्चमा मुद्दा लडेकै हुन् । प्रहरी अधिकारी दुर्जकुमार राई जनआन्दोलनका दोषी होइनन् भनेर पनि सर्वोच्चमा पैरवी गरेकै हुन् । अझ यी र यस्ता विषयभन्दा माथि उठेर यो देशमा कानुनको शासन हुनुपर्छ भन्दै माइतीघर मण्डलामा भाषण गर्ने पनि
यीनै शम्भु थापा हुन् ।
कानुन व्यवसायीको कार्यालमा छापा मार्न पाइँदैन भन्ने तर्क सुन्नेहरू पनि हाँस्ने कि रुने भनेर बिलखबन्दमा परेका छन् । यस्तो तर्क मान्ने हो भने कानुन व्यवसायी कानुनका संरक्षक भएकाले उनीहरूलाई छुन पाइएन । पत्रकार सूचनाका संबाहक भए, उनीहरूलाई छोए लोकतन्त्र र मासिने भयो । सेना–प्रहरी जनता र देशका सुरक्षाकर्मी भए, उनीलाई चलाए देश संकटमा पर्ने भयो, राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई छोए राष्ट्रले नै सराप्ने भयो । अनि यी सबैलाई माफ गरेर राज्यले के गर्ने ? कि असनका भरियाको लँगौटीमा छापा मार्ने ? अरूले यसो भने ठीकै थियो, कानुनका ज्ञाता हौँ भन्दै कालो कोटमाथि कालो झोला झुन्ड्याएर हिँड्ने कानुन व्यवसायीले यसो भन्दा सर्वसाधारणले मुर्छा नपरेर के गरुन् ?
तर, अदालतको निर्णय आफ्नो पक्षमा आउँछ कि आउँदैन भन्ने प्रश्न अहिले महत्त्वपूर्ण बन्ने गरेको छ । किनकि शम्भु थापा र उनीजस्ता कानुन व्यवसायीका कारण अदालतप्रति पनि ठूलै भ्रम परेको छ । उनै शम्भु थापाहरू कहिले भन्छन्– अदालतको फैसलाको विषयमा प्रश्न गर्न पाइँदैन, जसले गर्छ त्यसले कानुनी शासनको खिल्ली उडाउन खोजेको हो । फेरि उनै शम्भु थापाहरू कहिले भन्छन्– सर्वोच्च अदालतले मनलाग्दी फैसला गर्‍यो, त्यस्तो फैसला हामीलाई स्वीकार्य छैन । हुँदाहुँदा शम्भु थापाजस्ता वकिलहरू आइतबार त सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध मुखमा कालोपट्टी बाँधेर नाराजुलुस पनि गरे । अब यो स्पष्ट पार्ने जिम्मेवारी पनि शम्भु थापाहरूकै काँधमा आएको छ, उनीहरूले प्रस्ट पारिदिनुपर्छ– अदालतको फैसलाको विरोध को–कोले गर्न पाउने हुन्, नेपाल बार एसोसिएसनजस्ता संस्थाले नै त्यस्तो सूची जारी गरिदिए विशेषाधिकार पाएकाले अदालतको फैसलाको विरोध गर्थे, अरूले चित्त नबुझे पनि चुप लागेर बस्थे । कम्तीमा यो भ्रमको निवारण हुने थियो । (नयाँ पत्रिका दैनिकबाट साभार)